Category: Yesuus jireenya
02.05.2021 02.05.2021 by
Xiyyeeffannaan inni duraa. Kanas gochuuf wanta jireenya irraa gufachiisuu hundumaa irra fagaachuu fi gochuu dhiisudhanidha. Karaa biraatiin amanataan yoo fayyina isaa dhabuudhaa baatee, inni jiraachuu Waaqayyoo isa hundumaa gararraa fi eebbaa barabaraa keessa boqota.
Kronos app for mac
Kanaafuu nuyis deebinee waan luqqisoonni sun jedhan haa ilaallu. Kanaafuu luqqisoota kanneen keessaa muraasni akkaataa itti haalli argama eegicha jireenya barabaraa argamuu in jira. Jireenya barabaraa argachuuf keeyyattoota gargaaran. Lallaba keenyatti boca gaarii kennuuf, lallaba AMC itti fayyadamuu haa eegallu.
Walumagalatti hiikni jechicha kana iftoomina dhuunfaatti jira, garuu qabxiin lama dirqama yaadatamuu qaba. Kan inni gargaaramee bifa karaa namoonni tattaaffi godhanitti gargaarameeti. Inni Waaqayyo isaa amantoota tiksuu, malee amantoota mata isaanii hin ilaallatu.
Inni fayyina keenya eegu, isa guddaa fi hunma Waaqayyo isa hundumaa caaludha kan. Uumamni haaraan kan inni oomishuu, Uumama haaraa dha Massihicha Yesuus keessatti 2 Qoroontos Garuu tokko inni Massihicha wajjin walitti firoomee, Isin sanyii baduttii utuu hin ta'in, sanyii hin badnettii sagalee Waaqayyoo isa jiraataa fi isa akka jirutti hafuun, haaraa taatanii dhalattaniittu 1 Pheexiros Efesoon Roomaa Egaa si'achi Kiristos isa ana keessaatu jiraata malee, anatu jiraata miti; jireenya ani amma fooniin jiraadhu immoo, ilma Waaqayyoo isa na jaallate, ofii isaas dabarsee isa anaaf kennetti amanuudhaan nan jiraadha.
Keeyyattoonni kun warra kanatti aananii dhufan keessa fudhataman:. Namummaan amantoota inni keessa raawwatee balleeffameera. Kanaafuu qaama cubbamaa jedhamee itti faradamuu hin qabu. Kan kana biraa darbuu qaama cubbamaa hin qabu, kanaafuu rakkoo qulqullummaatiin hin komatamu.Nuti iddoo adda addaatii dhufne, nuti garuu wal qixa. Anii fi namoonni isaan kaan hedduun furtuu arganneerra. Seenaa argannoo koo akka hubattan isinan gaafadha.
Kollejjii irraa yommuun eebbifame, hawaasatti nagaa dhaameen, haala jireenyaa isa amantaawwan keessatti argamu dhiisuun miilla koo akkasumas yaada koo waliin deeme. Guyyoonni sun wantota hedduuf ija keenya nuuf banan, yaadnii fi ilaalchi kan mataa keenyaa nu gaddisiise. Laficha irra kuduraa hedduu kan nama hawwatutu ture, nama Niwu Yoorkii dhufu tokkoof daran mijataa dha; garuu dhibba afur inni jedhame sun gara afuriitti xiqqaachuun, nuti godoo xiqqoo kan bishaanii fi ibsaa elektirikaa warra kaan wajjin hirmaachuu nu hin dandeessisne keessa jiraanne, kuduraa nyaannee booda bookeewwan gurguddoon nu nyaatu turan.
Torbanoota muraasa booddee jireenya koo fayyisaaf kennuun bishaan Hawaay isa cuquliisa kan hedduu miidhagu keessatti naannoo Waldaa sanaattin cuuphame. Ani kollejjii yookiis seminaara Macaafa Qulqulluu kam keessatti iyyuu hin baranne, dhugaa beekuuf garuu gatii baaseera.
Waggoota lama booda, anii fi haati manaa koo ijoollee keenya lamaan wajjin gara Hawaayitti deebine, yeroo sana qarshii, mana, hojiis hin qabnu turre; Waaqayyo garuu karaa biraa nuuf qopheessu kun garuu seenaa adda biraa ti. Yesuus akkana jedhe, Kadhadhaa isiniif in kennamaa, barbaadaa in argattuu, balbala rukkutaa isiniif in banama Maatewoos Waaqayyo karaa Isaayaas raajichaa akkana jedhe.
Isin yoo dhuunfaa keessaniin jaalala Waaqayyoo kan hin beekne taatan, amanaa ifni Waaqayyoo dukkana koo akkuma ibse laphee keessan keessas seenee isiniif ni ibsa. Ani dur nama hafuura hamaan guutamen ture sababni isaa waggootaaf daawwaa araada nama qabsiisan hedduu fudhachuu akkasumas waaqolii tolfamoo waaqessuu, amantaawwan seexanaa fi filoosoofii sobaatti qabameen ture, dhiigni Yesuus garuu bilisa na baase! Ilmi Waaqayyoo inni cubbuu hin qabne jaalala Waaqummaan isin jaallatee fannoo irratti dhiiga isaatiin gatii cubbuu keessanii isiniif baaseera.
Gatiin cubbuu keessanii isiniif baafameera.
Gama keessaniin wanti hafe isin Waaqayyo wajjin nagaa qabaachuu duwwaa dha Lakkoofsa Wanti isin gochuu qabdan gama keessaniin balbalicha bantanii gara isaa deemuu qofaa dha. Oduu fayyinaa isa gammachiisaatti amanaa, Waaqayyo immoo cubbuu keessan hunda isiniif dhiisa.
Ergamichi Phaawuloos akkana jechuun oduu gaarii kana dubbata. Kana amanuudhaan fayyaa. Waaqayyo wajjin nagaa qabaadhaa. Wareegama ilmi Waaqayyoo isiniif baase amanaatii fayyaa. Amma maaliif garaa keessan ol fudhattanii Waaqayyo ilma isaa isiniif kennuu isaaf akkasumas cubbuu keessan isiniif dhiisuu isaaf isa hin galateeffattan! Akka amanaa haaraatti, isin amma warra kaan gara fayyisuu Gooftaatti fiduu ni dandeessu. Isaan kana dhuunfaa keessanitti dubbisaa; isa booda barsiisaa Macaafa Qulqulluu barbaadaatii irraa baradhaa.
Luqqisiiwwan Yaadatamuu Qaban. Roomaa Waaqayyo, akkasitti tokkicha ilma isaa hamma kennuufitti biyya lafaa jaallate; kun immoo isatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa haa qabaatuuf malee, haa baduuf miti! Yohaannis Yommuu isin akan gootan Waaqayyo isin haa eebbisu!
Obbo Zaman Indaalee Qunnamaa. Obbo Zamaniin teessoo armaan gadii kanaan qunnamuu ni dandeessu Toora Iimeelii email : zemendale gmail. Bilbila mobaayilii: Afaan Oromo - in theological order.Gaaffii baay'ee barbaachisaa. Yesus Kiristoos eenyu? Gaaffii: Yesus Kiristoos eenyu? Deebii: Akka gaaffiin 'Waaqayyo jiraa? Yesus Kiristoos waggoota dura biyya Israa'eel keessa deddeebi'aa nama ture ta'uu isaa ni fudhatu. Gaaffiin kan ka'u yeroo eenyummaa Yesuus kaasuun jalqabamuudha.
Manneen amantaa hundinuu Yesus nama raajii, barsiisaa gaarii fi nama gaarii ta'uu isaas ni barsiisu. Lewis kitaaaba isa Mere Christianity jedhu keessatti kanatti aanee kan jiru arganna, 'Namoonni heedduun waa'ee isaa Yesus Kiristoos kan jedhan jecha gowwummaa hambisuuf yaalaattan jira.
Yesus Kiristoosiin akka nama naamusaa isa guddichaatti fudhachuudhaaf qophaa'oodha. Garuu Waaqayyo ta'uu isaa hin fudhadhu. Isa kana egaa jechuun kan nurra hin jiraanne. Yesus Kiristoos kan hojjetee fi kan barsiise akkuma nama barsiisaa naamuusa gaarii ta'e duwwaatti hojjetamuu kan dand'u miti.
Namni akkasii yookiin maraatuta'uutu irra jira. Yookiin immo Seexana Gaannamaa ta'uu danda'a. Gowwaadhaa jettee isa bira darbuu, itti tufuu, Jinniidha jettee isa ajjeesuu dandeessa. Yookiinis Waaqa koo tookiin Gooftaa koo jettee milla isa jelatti kufuu dandeessa. Garuu hafuuraa gad aanaa bifa agarsiisuun barsiisaa guddaa jechuun of hin jejinu. Inni kun filannoo isaa keessa hin jir. Filannoo akkasii akka qabaannuuf fedhii isaa hin turre. Macaafni Qulqulluun waa'ee eenyummaa isaa maal nuun jedhaa?
Duraan dursinee jecha Yesus Yohaannisirraa haa ilaallu 'Abbaani fi ani tokkicha' irra keessa isaa duwwaa yeroo ilaalamu, labsii Waaqayyummaa fakkachuu dhiisuu danda'a. Yihudoonni jecha Yesus labsii Waaqayyummaa ta'uu isaa galeef. Waraabbii itti aanaanitti Yesus Yihudotaan, 'Ani akkan Waaqayyo ta'en dubbadhe' jechuun isaan hin sirreessine.
Kun kan mirkaneessu Yesus dhugumaan Waaqayyo ta'uu isaa dubbachuu isaati 'Abbaani fi ani tokkicha' Yohaannis Yohaannis irrattis fakkeenya gara biraa jaratti dubbate, 'Dhuguma dhuguman isinitti hima, Abrihaam utuu hin dhalatin iyyuu ani jiran ture.
Maarree jarri akka arabsootti kan lakkaa'an labsii Waaqayyummaa isaa ta'uu dhabaannaan Yihudoonni sababa maaliitiin dhagaadhaan isa rukutuuf ka'anii? Yoohannis akkas jedha''Sagalichi ofii isaa Waaqayyo ture.
Kun sirriitti kan inni ibsu Kiristoos Waaqa foon uffate te'uu isaatii. Yesuus isa hin sirreessine. Ergamaan Phaawloos akkas jechuudhaan isa ibsa,'Yesus Kiristoos inni Waaqayyo keenya isa guddicha fayyisaa keenya Tiitoos Ergamaan Pheexroosis akkauma kana jedha, Waaqayyo keenyaa fi fayyisaa keeenyaa Yesus Kirstoos 2 Pheexroos Waaqayyo abbaanis waa'ee eenyummaa Yesus guutummaatti akkas jedha, 'waa'ee ilmaa garuu, Teessoon kee yaa Waaqayyo, baraa hamma bara garaatti, uleen mootummaa kees ulee qajelummaatti' Raajiiwwan kakuu moofaas waaqayyummaa Yesus akkas jechuun dubbatu, Mucaan nuuf dhalateera, Ilmis nuuf kennameera humni mootummaa isaa gateettii isaa irra jira.
Egaa akka C. Lewis agarsiisuutti, Yesus Kiristoosiin akka barsiisaa gaarii duwwaatti fudhachuun filannoo miti.
Hiiki jireenyaa maalii?
Yesus ifatti kara amanamuun Waaqayyoon ta'uu isaa dubbateera. Jechawwan Yesus ibsuudhaaf 'beektonni' bara si'anaa yeroo yaalii taasisan 'Yesus inni dhugaan seenaa keessatti mula'ate' isa Macaafni Qulqulluun waa'ee isaa dubbatu amala isaa waan baay'ee inni hin dubbanne jedhu.
Sagaleen Waaqayyoo kan waa'ee Yesusiin ilaalchisee kan dubbatuu fi kan hin dubbanne mormuudhaaf nuyi eenyuu?Get this from a library!
Macaafa qulqulluu: afaan oromoo. Gara Hiika Afaan Oromoo tti baga nagaan dhuftan! Gaaffiilee Macaafa Qulqulluu deebiin kennameef. Gaafilee Afaan Oromotiin nuuf. Obboloota keenya kabajamoo Itoophiyaa keessa jirtan Kitaaba xiqqoo kana gaaffii kabajamoo Obbo Zaman Indaalee Tajaajila Raadiyoo Sagalee dhugaatiin isiniif kennuuf carraa argachuu kootti baayyeen gammada.
Wanti as keessatti dhihaatu barreeffama fuula dhibbaatamaa toora weebsaayitii kootii www. Achumaan dhugaawwan Macaafa Quqlulluu keesatti ibsaman itti fufnee jalqabarratti haala Waaqayyoo, isa jalqabumaa kaasee jiraatee fi Macaafa Quqlulluu harka namootaatiin oomishee ilaalla.
Kanaafuu jireenya keenya hafeef macaafaa dubbii Waaqayyoo taanee of wareeguun Waaqa isa cubbamoota akka keenya dhiiga Isaa isa cubbu-maleessaan baraaruuf ilma Isaa nuuf erge kutannaadhaan Waaqeffachuu fi tajaajiluutti haa seennu. Sagalee Waaqayyootiif akkuma xiyyeeffannaa kennitanii fi akkuma itti deddeebitaniin eebbifamaa. Garba keessanii fi barataa Sagalee Waaqayyoo, Noormaan Manzoon. Kitaabonni adda-addaa yaada wal-faalleessaa qaban danuun biyya lafaarra in jiru. Macaafin Qulqulluun garuu odeeffannoo walfaalleessu wayii kan hin qabneedha.
Gaggeessaanis maarree dhugumattuu hafuura gadi roomoo. Duulli hedduun Macaafa Qulqulluu irratti taasifamaa turaniiru. Jijjiiramin wayiituu gonkumaa hin jiru.
Ulfina dubartoota, warra, ijoollee, warra hin dhalanne, hiyyeeyyii, warra qaamaan gidiramanii fi keessummootaaf kennamuu qabu irrattis Inni akka Sunaamiitti addunyaa waliin gaheera.
Shakkii tokko malee Inni sagalee jaalala Waaqa jaalalaa biraa dhala namaa isa Inni karaa hundaan fayyisuu fi eebbisuu fedhuuf dhufedha. Waaqayyo ofuma Isaatiin jiraata. Haalli jireenya Isaa jireenya uumama kan biraa wajjin walitti dhufeenya kan qabu miti Uma. Walumaagalatti namummaa qabaachuuf wantoota sadiitu barbaachisu jedhamee yaadama, Waaqayyos hundasaaniiyyuu qaba.
Dandeettii sammuu waan hunda qabuu: Waaqayyo sadii Waaqa Tokko. Waaqayyo jalqabaa fi dhuma hin qabu: Waaqayyo iddoo hundattuu in argama. Inni wanti tokkoyyuu otuu Isa hin daangeessin wantoonni hundiyyuu otuu haala Isaa hin hidhin raawwachuuf daangaa malee humna kan qabuudha.
Waaqayyo waan hundaa beekaadha: Inni guutummaan guutuutti hanqina kan hin qabnee fi muudaa kan hin qabnedha Mat. Waaqayyo kan hin jijjiiramne, Inni haala Isaatiin bara-baraaf kan hin geeddaramne, akkasumas immoo argamuu Hafuura Isaa amalli, seeronni, abdiiwwanii fi kanneen maalummaa Isaatiin walqabatan kan birootiin kan hin jijjiramnedha Milkiyaas 3: Waaqayyo uumaa wantoota hundaati.
Dhalli namaa bara, haalaa fi iddoon daangeffame jirata. Inni amala gadhee qabu amala isaa isa gadhee dhiisuuf, inni furdate qallachuuf, inni barnootaan boodetti hafe barumsa itti fufuuf, …kkf… murtoo waggaa haaraa godhatu. Waanti isa mudate kun waan humna issantiin olii ture. Waaqayyo akka namaa bara, haalaa fi iddoon hin daangeffamu. Waaqayyotu nama wajjin jirachuu jaallate namaa fi Ofii isa giddutti kakuu dhaabe. Waaqayyo ayyaana fi araara isaa isa guddadhaan dhiifama cubbuu nuuf kenne, nuti araarame, ijolleewaan Isa nu godhate.
Dubbiin kun dubbii ayyaana fi araara Waaqayyo ti. Waaqayyotu ayyaanaa fi araara isaatiin kan Ofii isaa nu godhate. Amma erga kan Isa taane, jireenya keenya akka yaadaa fi jaalalla Waaqayyotti qajeelfachuun nu irra eegama. Kanatti namni hundumtuu dhimmamee, gaatii isaa baasisu baasee raawwachu qaba.
Dubbiin kun eegaa dubbii bara, haalaa fi iddoo Waaqayyo nama jiraachise keessatti namni murteeffate, dhimmamee jirachu qabuu dha. Haalli durri darbee haalli haaraan dhufe jira, dhufaa jiras.
Eega nutis Waaqayyo ayyaana fi araara isaan baraa fi haala inni nuuf kenne kana keessatti yaada Isa barbaddachuu fi waan isaatti tolu, waan nu guddisuu fi waan annisaa nama kennu tokko gochuutu nu irra jira.
Kun immo murteeffanna nama gaafata. Yoo gaaruumma Waaqayyo hojjetu keessa qooda qabachu feene, mamii tokko malee garaa kutannaan waan qajeelaa fi waan gaarii, waan eegree qabu gochuuf oftti murteesutu nu irraa eegama. Waaqayyo waan fedhee raawwachuuf waan Isa daangesuu hin jiru.
Nuti immoo Waaqayyon alatti waa gochuuf hin dandeenyu—nuti daangeffammoo dha. Eega nuti amma maal gochuutu nuuf mala ree. Roomaa Waan isaan itti of kennaniitti of hin kennina. Nutis tolaan keessa darbuu hin dandeenyu. Goofta keenya iyyu lubbu isaa kennu isa gaafate. Nutis kottaa gaatii basinee duuka buutu isaa tana!
YESUUS JIREENYA GURMUU ELSHAADAAYII GUUTUU WANGEELAA DAMBI DOLLO
Everybody want to a leader. I like your connection. I thank God for the wisdom you used in sharing the good news. Keep it up!
Motorola gm350 mmdvm
Murtoon hin jiru taanaan akka akka Deemaas kayyoo baaneef irraanfannee foolii biyya lafaatiin fudhatamnee kufna 2Xim. Gaafa Yesuus wajjin murtoo goone inni immoo dabaree isaa ayyaana isaa waan hundumaa Fili. Waaqayyo isin haa gargaru. Your email address will not be published. Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. Notify me of follow-up comments by email. Notify me of new posts by email.
Notify me of followup comments via e-mail. You can also subscribe without commenting.Burqaan akkuma maqaa isaa kan burqu bishaaniidha.
Burqichi nu ama dubbanu kun isa kan biyya lafaa jiru irraa addadha. Lubuun kee ni dhebootee? Gara Yesus dhaqii inni bishaan dhebuu sibaasu burqaa isaa qabaa hoo! Fayyinni karaa Yesus malee akka hin jiree HoE.
Bishaan jireenya kun haafura qulqulluu isa namni Yesusitti amane argatuudha Yoh. Gemechu Gelalcha Mar 27, You are commenting using your WordPress. You are commenting using your Google account. You are commenting using your Twitter account. You are commenting using your Facebook account. Notify me of new comments via email. Notify me of new posts via email. Create a free website or blog at WordPress. Share this: Twitter Facebook. Like this: Like Loading Leave a Reply Cancel reply Enter your comment here Fill in your details below or click an icon to log in:.
Gaaffii: Hiiki jireenyaa maalii? Deebii: Hiiki jireenyaa maalii? Jireenya koo keessatti kaayyoon, boqonnaan,milkaa'uummaan akkamiin argamuu danda'aa? Hijii itti fufeenya qabu rawwachuudhaaf dandeettii nan argadha laataa?
Namoonni heedduun waa'ee dhimma kanaa gaaffii kaasuun jaraa hin oolu. Jireenya isaanii keessatti rawwachuuf kan yaadan yoo raawwatanis waggoottan booda irraa deebi'anii walitti dhufeenyi jarri namootaa wajjin qaban akkamiin akka bade akkasumas duwwummaan maaliif akka jaratti dhaga'amu utuu jara hin dinqin hin oolu.
Atileetiin tokko beekumtummaa guddaa erga argatee booda tapha yeroo jalqabu namoonni maal jedhaanii yoo itti dubbatan ni barbaada yoo ta'ee yeroo isa gaafatan 'bakka guddaa erga ga'amee booda umtuu akka hin jirree utuu natty himanii nan fiadhan turee' jechuun gaabbiin dubbateera.
Milkaa'uun heedduun duwwaa ta'uun isaanii kan mirkaneeffammu isaan raawwachuudhaaf waggoonni heedduun erga darbanii booda. Akkaataa adaa namummaa keenyaatiin namoonni hiika akka argatan yaadu. Namoonni heedduun kaayyoo heedduu gaggeessu kaayyoo jireenyaa kana keessa daldalaan milkaa'uu, qabeenyaa, waltti dhufeenya gaarii, walqunnamtii saalaa, bashannanaa fi namoota hedduudhaaf waan gaarii hojjechuu haammata.
Namoonni yeroo dhugaa ba'an akka hubatametti qabeenya horachuun walitti dhufeenya gaarii hundeessuudhaaf gammachuu argachuun kaayyoo isaaniin milkaawanis namni kami iyyuu guutuun kan hindandeeny bakki duwwaan akka isaanitti dhaga'amu dubbataniiru.
Barreessaan macaafa Lallabaa yaada kana ibisuudhaaf 'waanti hundinuu kan waa'ee hin baafneedha waa'ee hin baasu dhugumaan waa'ee hin baasu jedha! Inni yeroo tokko ala dubbatu inni waan barbaade hundumaa akka duukaa bu'aa ture dubbata. Sababni isaas Waaqayyo kan nu uume kan isa kanaa fi ammaa kan shaakalluun garaarraa kan jiruudhaaf. Solomoon waa'ee Waaqayyoo yeroo dubbatu, 'hawwii waanta yeroo dheeraa waanta bara dheeraa ta'u beekuus yaada ilmaan namootaa keessa kaa'eera' Lallaba hundumti keenya garaa keenyatti akkuma beeknu waanti jiru 'asii fi amma' waan jiru duwwaa akka hin taane ni hubanna.
Seera Uumamaa Macaafa Qulqulluu keessaa macaafa jalqabaa keessatti Waaqayyo nama akka bifaa fi fakkeenya isaatiitti akka uume ni dubbifanna Seera Uumamaa Nuyi uumama keenyaan uumama kan biraa irraa karaa adda ta'een Waaqayyoon fakkannee uumamne. Kanatti dabalatee kan argannu ilmi namaa cubbuutti kufee abarsi cubbuu biyya lafaa irratti dhufuu isaan dura waantonni kanatti aananii jiran dhugaadha.
Kunneen hundinuu jireenya keenyaaf boqonnaa akka argamsiisaniidhaaf Waaqayyo karoorsee kan ture, garuu kunneen hundinuu keessumattu tokkummaan namni Waaqayyoo wajjin qabu geeddarameera sababni isaas ilmi namaa cubbuutti erga kufee booda abarsi biyya lafaa irratti hojii irra ooluu isaa irraan kan ka'eedha Seera Uumamaa 3.
Macaafa xumura Macaafa Qulqulluu kan tae mullata Yohaannis irratti Waaqayyo waan tokko kaa'eera. Amma kan jiran laftii fi samii dabarsee waaqa haaraa fi lafa haaraa uuma.
Crop in qgis
Rew room simulator
Joc labirint copii
Bootstrap otp input - of /index.php
Data augmentation neural network
Population ecology lecture notes pdf
Lock screen on amazon fire tablet
Free smime certificate
Gigabyte vdg header
Matlab remove rows
Thoughts to “Yesuus jireenya”